स्थानीय निर्वाचनपछि लगानीमैत्री वातावरण - Karobar National Economic Daily
स्थानीय निर्वाचनपछि लगानीमैत्री वातावरण
query_builderJune 9, 2017 12:35 PM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility433
तीन सातापछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा हुँदैछ । पहिलो चरणमा तीन प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै डेढ दशकदेखि रिक्त साविकका स्थानीय निकायले पुनर्संरचनासँगै नयाँ नेतृत्व पनि पाएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सर्वसाधारणका लागि मात्र नभइ उद्यमी व्यवसायीका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पूर्ण अधिकारसहितका स्थानीय तहले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ । यसले मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि तथा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त अवसरहरू सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
पूर्वी नेपालको आर्थिक राजधानी तथा सभ्यता र संष्कृतिको पर्याय मानिने विराटनगर पनि नयाँ निर्वाचनको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेको छ । यहाँका व्यवसायीहरू नयाँ सरकार गठन, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन तथा सरकारले हालै ल्याएको बजेटबाट निकै उत्साहित देखिएका छन् । पूर्वका केही व्यावसायिक प्रतिनिधिहरूको यसैसम्बन्धमा कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले संकलन गरेको बिचार :
आउदो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने निश्चित
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । शेरबहादुर देउवा सरकार सञ्चालनमा धेरै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ । यो सरकार संयुक्त सरकार भएकाले सबै पार्टीलाई साथमा लिएर मुलुकलाई आर्थिक विकासमा लानुपर्छ । पौने १३ खर्बको बजेट आएको छ । यो ठूलो आकारको बजेट हो ।
अघिल्लो सरकारको पालामा झन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । मलाई त लाग्यो, यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने निश्चित छ । बजेट आएर मात्र हुँदैन; कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने देशको विकास हुन सक्दैन । विगतमा पनि विकास बजेट खर्च नभएका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यो बजेटको सुन्दर पक्ष भनेको मुलुकलाई संघीयतामा जाने बाटो खोलेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा यो बजेट अत्यन्तै महŒवपूर्ण हो भन्दा फरक नपर्ला ।
यसपटकको बजेट सीधै गाउँमा पुगेको छ । जनप्रतिनिधिले जनताका चाहनाअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा के–के आवश्यकता छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट खर्च गर्नु जरुरी छ । बढीभन्दा बढी भौतिक संरचनाको विकासमा बजेट खर्च गर्नुपर्छ । भौतिक संरचनाको विकास नभई उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन । तर, जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना र भावनाअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्छ । दुई–तीन महिनाभित्रै राम्रा संकेतहरू देखिन थाल्छन् । स्थानीय स्तरको विकास भयो भने उद्योगधन्दाहरू फस्टाउँछन् ।
जबसम्म उद्योगधन्दा फस्टाउँदैन तबसम्म रोजगारी सिर्जना हँुँदैन । अहिले रोजगारीका सिलसिलामा लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि विदेशले कामदार लिन छाड्यो भने त्यसपछिको अवस्था के होला ? त्यसो भएकाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालले अब आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ–मार्छ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन भइसकेर जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पनि थालिसकेको अवस्था छ । निर्वाचनको विकल्प छैन अब ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते हुनैपर्छ र आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र संघको पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । आधा चुनाव भइसकेको छ, अब असन्तष्ट दल पनि आउँछन् । तीनवटै चुनाव समयमै हुन्छ । एक–दुई महिना यताउता होला, तर निर्धारित मितिमै चुनाव हुन्छ । अब चुनावलाई कसैले रोक्न सक्दैन । मौद्रिक नीति आउने क्रममा छ । मौद्रिक मात्रै होइन, नीति बनाउँदा जनताले खोजेको नीति ल्याउनुपर्छ ।
समयभित्रै बजेट खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ
उपाध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नम्बर १
२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन अब असार १४ गते नै हुनुपर्छ । तोकिएको मितिभन्दा अब सार्नु हुँदैन । आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयनमा दलहरू लाग्नुपर्छ । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको छ । अब पक्कै पनि देशमा लगानीको वातावरण बन्नेछ ।
लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो । सानो कामका लागि पनि जनताले धेरै दुःख पाउनुपर्ने अवस्था थियो । अर्को कुरा, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । सही संयन्त्रको प्रयोग गरेर समयभित्रै बजेट खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । समयमै बजेट खर्च हुने अवस्था सिर्जना भयो भने पक्कै पनि उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने मात्रै होइन, रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै देशले विकास र आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने देखिन्छ ।
ठूलो आकारको बजेट भएकाले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि चुनौतीचाहिं पक्कै छ । चुनौतीलाई हटाउँदै बजेटको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । भर्खर तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्रीको अनुभव बटुलिसक्नुभएका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले विगतका आफ्ना अनुभवलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लान योगदान दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिन सकिन्छ । अघिल्लो सरकारले काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ ।
यदि देशभर नै लोडसेडिङमुक्त गर्ने हो भने अघिल्लो सरकारका पालामा जुन आर्थिक वृद्धिदर भएको छ, त्योभन्दा अझै बढी हुनेछ । मलाई विश्वास छ, नयाँ सरकारले लोडसेडिङ हटाएर उद्योग–व्यवसायहरू सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ । खास गरी पूर्वमा लामो समयदेखि लोडसेडिङ हुँदै आएको छ । अझै पनि पूर्वमा लोडसेडिङ हट्न सकेको छैन । लोडसेडिङ हटाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । लोडसेडिङ नहुने हो भने थप उद्योग आउनेछन् । उद्योगको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ।
उत्पादन वृद्धि हुनु भनेको रोजगारी सिर्जना हुनु हो । सरकारको राजस्व वृद्धि हुनु हो । स्थानीय तहलाई ठूलो बजेट छुट्ट्याइएको छ । अब बन्ने स्थानीय सरकारले त्यो बजेटलाई सही ठाउँमा प्रयोग ग¥यो भने गाउँको विकासले पनि फड्को मार्ने निश्चित छ । दुई–दुई महिनामा ब्याजदर वृद्धिले उद्योगी–व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । आउँदो मौद्रिक नीतिमा यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ
दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा सर्वसाधारणले धेरै सास्ती भोग्नुप¥यो । अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदरबारका अधिकार गाउँ तहमा ल्याउनेछ । आफैंले छानेका जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना अधिकार पाउनेछ । अब विगतमा जस्तो सामान्य सरकारी कामका लागि पनि हप्तौं कुद्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । धेरै काम गाउँ तहबाटै हुने भएकाले जनताले राहतको महसुस गर्नेछन् ।
त्यसो भएकाले अब यो निर्वाचनको मिति सार्नु हुँदैन । पटक–पटक निर्वाचनको मिति सार्दा जनतामा आशंका उब्जिएको छ । तसर्थ तोकिएकै मितिमा निर्वाचन होस् भन्ने हामी उद्योगी व्यवसायीको पनि चाहना छ । सरकारले ल्याएको बजेटले यसपटक निजी क्षेत्रलाई खासै छुन सकेन । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसमेत समेटिएन । त्यसो भएकाले पनि हाम्रा माग बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ ।
जे–जस्तो बजेट आएको छ, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नयाँ बनेको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । धेरै ठूलो आकारको बजेट आएकाले कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । यो बजेटले संघीयता कार्यान्वयनमा भने महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट आएको छ । ठूलो बजेट स्थानीय तहलाई दिइएकाले त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । अब आउने जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा के आवश्यक छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।
नयाँ सरकारले खास गरी लोडसेडिङ अन्त्य, विकास–निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले राजधानीलाई त लोडसेडिङमुक्त ग¥यो, तर अन्य क्षेत्रमा अझै लोडसेडिङ छ । पूर्वमा ठूलो समस्या भनेकै लोडसेडिङ हो । लोडसेडिङ अन्त्य हुने हो भने नयाँ–नयाँ उद्योग खुल्ने थिए । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र उत्पादन वृद्धि भएर व्यापारघाटा कम गर्नसमेत मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
लोडसेडिङका कारण आज नयाँ उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा रोजगारीको खोजीमा दैनिक सयौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । अब आउने मौद्रिक नीतिले उद्योगी–व्यवसायीका मर्म र भावना समेट्नुपर्छ ।
स्थिर सरकार नबनेसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुदैन
नयाँ सरकार आउँदैमा उद्योगी–व्यवसायीहरू खुसी हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । आठ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकमा अन्योल बढेको छ । जबसम्म स्थिर सरकार हुँदैन तबसम्म मुलुकको विकास हुँदैन । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यसरी छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भएका पाइँदैन । तर, नेपालमा वर्षमा दुई पटक सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ ।
अस्थिर सरकारकै कारण अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास हुन सकेको छैन देशमा । यसरी सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारी र जनतामा विश्वास हुँदैन । एउटा मन्त्रीले सुरु गरेको काम अर्को मन्त्रीले निरन्तरता नदिने परिपाटी छ । अब सबै दल स्थिर सरकारको पक्षमा उभिनुपर्छ । स्थिर सरकारले मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सक्छ । विगत १० वर्षमा १० वटाभन्दा बढी नै सरकार परिवर्तन भइसक्यो । सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योग व्यवसायलाई छुन सकेको छैन । यो बजेट धेरै ठूलो आधारको आएको छ ।
अब यो बजेट कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेचाहिं प्रमुख विषय हो । खास गरी विराटनगरपूर्वलाई बजेटले छुन सकेको छैन । हामी वर्षाैंदेखि विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न माग गर्दै आएका छौं, बजेट हाम्रो मागका विषयमा मौन देखियो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारणले पनि हुनुपर्छ, नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा नसमेटिएको । कामचलाउ बजेटले मुलुकको विकास हुँदैन ।
अब सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट सीधै गाउँ तहमा आउने भएकाले अब निर्वाचनमार्फत आउने जनप्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ । बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्छ । विगतमा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने गरी काम गर्नुपर्छ । भाषण होइन, अब काम गर्ने बेला आएको छ । भाषण त धेरै सुनियो । स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तोकिएकै मितिभित्र हुनुपर्छ ।
निर्वाचन भयो भने मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य हुन्छ, मुलुक विकासमा अगाडि बढ्छ भन्ने आशा लिन सकिन्छ । नयाँ संविधानले सबैका हकअधिकार स्थापित गरेको छ । शतप्रतिशत पूर्ण त कहीं हुँदैन । भविष्यमा संशोधन गर्दै जाँदा हुन्छ । सबै दल अब चुनावमा आउनुपर्छ । चुनावबाट भाग्नु भनेको लोकतन्त्रबाट भाग्नु हो । जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हो ।
संघीय ढा“चामा बजेट आउनु सबैभन्दा सुखद पक्ष हो
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नसमेटी बजेट ल्याएको छ । यस पटकको बजेट पौने १३ खर्बको आएको छ । यो निकै ठूलो आकारको बजेट हो । यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो, त्यो त भोलिका दिनमा हेर्न बाँकी नै छ । एउटा महŒवपूर्ण पक्षचाहिं के हो भने बजेट संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित भएको मैले महसुस गरेको छु ।
संघीय ढाँचामा बजेट आउनु सबैभन्दा सुखद पक्ष हो भन्दा फरक नपर्ला । स्थानीय तहलाई नै बजेट बाँडफाँड गर्ने गरी बजेट आउनु राम्रो पक्ष हो । अब जनप्रतिधिहरूले स्थानीय जनताको चाहना र इच्छाअनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्छ । यो बजेट पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो ।
यदि यो बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत नाघ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले निकट भविष्यमै नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । नीति ल्याएर मात्र हुँदैन, त्यसले जनताका आवश्यकतालाई कतिको सम्बोधन गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ । दुई–तीन महिनामै मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
नयाँ सरकार आएको छ । सरकारको पहिलो बैठकले तोकिएको मितिभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्ने र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएर देशको आर्थिक विकास गर्ने निर्णय गरेको छ । यो उद्योगी–व्यवसायीका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण देशवासीका लागि खुसीको कुरा हो । मलाई लाग्छ, तोकिएको असार १४ मै दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचन हुुन्छ ।
झन्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको थियो । अब त नयाँ संविधानले धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएकाले जनता निर्वाचनमा भोट हाल्न आतुर छन् । तीनै तहको निर्वाचनपछि मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । अस्थिर सरकारका कारण लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
सरकारपिच्छे फरक–फरक नीति अवलम्बन गर्दा थप लगानी आउन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । उद्योग व्यवसायमा लगानी थपिएसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन ।